6 စှဲခြှတောသိကောင်းစရာများသည့်အခါရထားဥရောပခုနှစ်တွင်ခရီးသွား | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >6စှဲခြှတောသိကောင်းစရာများသည့်အခါရထားဥရောပခုနှစ်တွင်ခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 24/01/2020)
ရှေးရှေးတုန်းက, ဘတ်ဂျက်တွင် Destinations ရွေးချယ်ရာတွင်တစ်အခန်းကဏ္ဍမကစားခဲ့ဘူးသည့်အခါ (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး, တစ်အခန်းကဏ္ဍအဖြစ်ကြီးတွေမဟုတ်!) အမှုအရာလွယ်ကူပါတယ်ခဲ့ကြသည်; ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ, ကျွန်တော်တို့ဟာသွားလာလိုလျှင်, ကြှနျုပျတို့ဘတ်ဂျက်ကိုင်တွယ်လမ်းကိုအတူစမတ်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်. ဥရောပမှာခရီးသွားရထားအများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တွေ့ကြုံခံစားရန်ရှာနေမယ့်သူကိုလူတိုငျးအတှကျအမြားဆုံးဘတ်ဂျက်-ဖော်ရွေ option ကိုသော်လည်း (နှင့်လျှော့ပေါ့!) ခရီးသွားလာလမ်း, နေဆဲသင်သည်ရှင်းလင်းသောခုတ်မောင်းချင်ပိုက်ဆံအိတ်-ပြဿနာအခြေအနေများရှိနိုင်ပါတယ်.
ဒါကြောင့်, သင်သည်သင်၏ခရီးသွားထဲကအများဆုံးရကူညီပေးဖို့, ကျနော်တို့အတူတူကျွန်တော်တို့ဟာဥရောပမှာခရီးသွားရထားများအတွက်အကြံပြုချက်များကိုချွေတာထိပ်ပိုက်ဆံဖြစ်ကြောင်းခံစားမိရာ၏စာရင်းကိုထားကြပြီ.
Peak အားလပ်ရက် Times သတင်းစာမှာခရီးသွားမနေပါနဲ့
ဟုတ်ကဲ့, ဒီတစ်ခုဟုမပါဘဲသွားသင့်တယ်, ဒါပေမယ့်တခါပြန်သင်သတိပေး၌ဘေးမရှိင်. ဒါဟာဥရောပမှာခရီးသွားလေ့ကျင့်မှကြွလာသည့်အခါ, အားလပ်ရက် သငျသညျများမှာအဓိကအားဖြင့်ခရစ္စမတ်၏ရှင်းလင်းသောခုတ်မောင်းချင်, နှစ်သစ်, နှင့်အီစတာအဖြစ်သြဂုတ်လတစ်လ. အကြောင်းပြချက်များအတွက်, အဆိုပါ စျေးနှုန်းများဆူပူ ဤအလတာကာလအတွင်း, ဒါကြောင့် ... သူတို့ကိုလှည့်ပတ်အနည်းငယ်အလုပ်လုပ်ဖို့.
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ချင်ဥရောပအစိတ်အပိုင်းများစူးစမ်းဖို့မသင်အကြံပေးမျိုးမမျှတခြင်းနှင့်အလှမ်းဝေးပေမဲ့, ငါတို့သည်သင်တို့၏အကျိုးအတွက်ကြောင့်လုပ်နေလုပ်နေ. ဥရောပမှာခရီးသွားရထား, သငျသညျအနောက်ပိုင်းအဆုံးအပေါ်အရာအားလုံးလမ်းကပိုစျေးကြီးအရှေ့ပိုင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုထက်ကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်. ဒါကြောင့်, သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ် thickened သည်အထိ, အရှေ့ခေါင်းနှင့်ဥရောပ၏ဤအခြမ်းများ၏အလှအပစူးစမ်း!
မှတ်စု: ဘယ်အချိန်မှာအရှေ့ဥရောပ, ပရာ့ဂ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုရပ်တန့်သေချာအောင် (ချက်သမ္မတနိုင်ငံ), ဘူဒါပက် (ဟန်ဂေရီ), ဘဲဂရိတ် (ဆားဘီးယား), ဘူခါရက် (ရိုမေးနီးယား), Zagreb နှင့် Split ကို (ခရိုအေးရှား), ဆာရာယဗေို (ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား) နှင့် မော်စကို (ရုရှားနိုင်ငံ).
ရထားဥရောပမှာခရီးသွားတဲ့အခါမှာ 1st Class ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ
ကောင်းစွာ, သိသိသာသာ! နေဆဲ, "မတော်တဆ" 1st အတန်းထဲတွင်ထိုင်သောသူတို့အားခရီးသွားများအတွက်တဦးဖြစ်ပါဘူး. အဘယ်ကြောင့်? သငျသညျပို 1st လူတန်းစားလက်မှတ်သူ့ဟာသူထက်သင်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သောဖမ်းမိရလျှင်သင်ဟာအလွန်စျေးကြီးတဲ့ဒဏ်ငွေပေးဆောင်တက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်ကြောင့်,!
နေ့ချင်းညချင်းရထား, ခေါ် ညဥ့်ရထား ဥရောပခရီးသွားများအတွက်အများဆုံးကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော option ကိုဖြစ်ကြသည်. သင်ပြုမသာ စျေးနှုန်းအပေါ်ကယ်တင် အိပ်ရာ၏သို့သော်သင်ကိုလည်းတစ်ဖွဲ့လုံးသစ်ကိုရှုထောင့်ကနေဥရောပကိုတွေ့ကြုံခံစားရ.
ကောင်းစွာ, ပျော်ပွဲစားပေမယ့်နေအိမ်ထဲကနေအစားအစာ၏တစ်ဦး "stash" မစာသား, ဒါကြောင့်သင်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်စျေးကြီးအစာကိုဝယ်ရန်မလိုပါ. သင်စူပါမားကတ်မှာရယူထားသောအပေါ်တက်စတော့ရှယ်ယာလျှင်သင်တစ်ဦးကံဇာတာကယ်တင်မည်!
ရထားဥရောပမှာခရီးသွားတဲ့အခါမှာ, တိုတောင်းသောခရီးရှည်လျားသူတွေကိုထက် pricier ဖြစ်မျှော်လင့်; နေဆဲ, သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ပြုလုပ်၏စှဲခြှတော၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှ add ပါဘူးပေးသောကြိုတင်မဲအတွက်စာအုပ်ရှိခြင်းမအကျိုးအတွက်လည်းမရှိ. သငျသညျပြည်မဥရောပမှာခရီးသွားကြသောအခါသင်တို့ကိုရထား boarding ရှေ့တော်၌ထိုဘူတာရုံမှာလက်မှတ်မဝယ်နိုင်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-train-traveling-europe%2F%0A%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
europeantravel europetravel အကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား traveltips